We.com.mm - CV Form တစ်ခုမှာ ရှောင်ရမယ့်အရာ (၉)ခု
အလုပ်ရှာနေသူတိုင်းအတွက် CV Form ဆိုတာ အရေးကြီးဆုံးအရာတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ရေးလိုက်တဲ့စာတွေဟာ သပ်ရပ်မှုရှိနေအောင် အထင်ကြီးစရာဖြစ်နေအောင် ပြင်ဆင်ရေးသားတတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့သင့်ဘဝမှာ ပထမဦးဆုံးအလုပ်စလျှောက်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အလုပ်ပြောင်းလျှောက်ကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ် သင့် CV Form ထဲမှာ မပါသင့်တဲ့ အချက်တွေထဲက တချို့ကတော့ -
1. အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေ
ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာ လိုရင်းတိုရှင်းနဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ ရေးရုံနဲ့ လုံလောက်ပါပြီ။ ကိုယ်လုပ်ရမယ့် အလုပ်မှာ ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားမယ် လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ထိထိမိမိနဲ့ ရေးတတ်ရင် လုံလောက်ပါပြီ။ ရှည်လျားထွေပြားပြီး လိုရင်းမရောက်ဘူးဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ဟာ အဓိပ္ပါယ်မဲ့သွားပါလိမ့်မည်။
2. ဆက်စပ်မှုမရှိတဲ့ အလုပ်အတွေ့အကြုံ
ထားပါတော့ သင်ဟာ အရင်အလုပ်မှာ Advertising နဲ့ ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေရှိတယ်၊ Marketing ပိုင်းကောင်းတယ်ဆိုပါစို့။ ဒါပေမယ့် သင် အခုလက်ရှိ လျှောက်ထားတဲ့ အလုပ်နဲ့ရော ဆက်စပ်မှုရှိပါလား။ ဆက်စပ်မှုမရှိရင် ထားခဲ့လိုက်ပါ။ လက်ရှိ သင်လျှောက်ထားတဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အတွေ့အကြုံကိုသာ ဖြည့်စွက်ရေးသားခြင်းသည်သာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
3. ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာများ
ဥပမာ သင့်မှာ6Packs ရှိတယ်ဆိုပါစို့။ အဲအကြောင်းကို သင့် CV မှာ ထည့်ရေးစရာမလိုပါဘူး။
အဲဒါတင်မကပါဘူး တခြား ရုပ်ပိုင်ဆိုင်ရာ အသွင်အပြင်တွေကိုလည်း သင့် CV မှာ ထည့်မရေးသင့်ပါ။
4. အောင်မြင်မှုမဟုတ်တဲ့ အောင်မြင်မှု
စကာတင် ၁၀ ယောက်ထဲမှာ ပါဝင်နေတယ်ဆိုတာ မှန်ပေမယ့် Winner ဖြစ်သူက သင်မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် အဲဒါဟာ အောင်မြင်မှုလို့ သတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။
ဒါကြောင့်မို့လို့ CV ထဲမှာ သင်ဟာ အဲလို အဆင့်သာ ရရှိဖူးတယ်ဆိုရင်တောင် လူအထင်ကြီးအောင် ထည့်ရေးဖို့ မလိုအပ်ပါ။
သင့်လျှောက်ထားတဲ့ အလုပ်နဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ဝါသနာဆိုရင်တော့ အတိုချုပ်လေးရေးရုံနဲ့လုံလောက်နေပါပြီ။
ဒီလိုမဟုတ်ပဲ စာဖတ်ခြင်းအစ သီချင်းနားထောင်ခြင်းအဆုံးထိလောက်တော့ ထည့်ရေးဖို့ မသင့်တော်ပါ။
6. ဝါကျဆီလျှော်အောင် မရေးတတ်ခြင်း
သဒ္ဒါမှန်ကန်မှုမရှိ စာစီဖွဲ့နွဲ့ထားတဲ့အရေးအသားဟာ မှားယွင်းမှုများနေတယ်ဆိုရင်တော့ လူတစ်ယောက်မှာ ရှိထိုက်တဲ့ First Impression ဆိုတာကို ထိခိုက်သွားနိုင်ပါတယ်။
သင့်အရေးအသားဟာ မှားယွင်းမှုတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ စာဖတ်သူတွေအတွက် ရီစရာတစ်ခု ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် စကားလုံးအကြီးကြီးတွေ သုံးစရာမလိုဘဲ သင်ရေးနိုင်တဲ့ သုံးတတ်တဲ့ ဝေါဟာရတွေနဲ့ ဆီလျော်အောင် ရေးတတ်ဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။
7. အတိအကျမဟုတ်တဲ့ ဆက်သွယ်ရမယ့် အချက်အလက်များ
အရေးကြီးဆုံးက သင့်ကိုယ်ပိုင် Email လိပ်စာပါ။ လူတိုင်းက Eamil လိပ်စာရှိကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တချို့ကဆိုရင် ကိုယ့် Email လိပ်စာဟာ လူအမြင်ကတ်စရာဖြစ်လောက်တဲ့ နာမည်မျိုးစုံဖြစ်နေခြင်း၊ Fake နာမည်ဖြစ်ခြင်း စသဖြင့် professional မကျတဲ့ Email လိပ်စာမျိုး မပေးသင့်ပါ။ Email လိပ်စာတစ်ခုလုပ်တာဟာ အရမ်းခက်ခဲနေခြင်းမဟုတ်တဲ့အတွက် ကိုယ်ပိုင်နာမည်နဲ့ ရှိနေခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
သင့်CVမှာ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်လို ဖြစ်နေအောင် ထည့်ရေးဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ လိုအပ်သလောက် လိုရင်းတိုရှင်းပဲရေးပါ။
ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ သင့်အလုပ်ရှင်မှာ များစွာသော ဖတ်စရာ CV တွေ ရှိလို့ပါ။
သင့် CV တစ်စောင်တည်းကိုပဲ ဖတ်ရတာမဟုတ်တဲ့ အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လိုအပ်သလောက်ရေးပါ။
သင့် CV ကို အနုပညာတန်း သင်ပေးတဲ့ဆရာ/ဆရာမဆီ သွားတင်ပြရမှာမဟုတ်တဲ့အတွက် သင်ရေးတဲ့စာတွေ အရောင်မျိုးစုံနဲ့ လှပနေအောင် ခြယ်သထားဖို့ မလိုအပ်ပါ။
အလုပ်ဆိုတာ မရှားပေမယ့် သင့်လုပ်ရပ်တိုင်းဟာ ဂရုစိုက်မှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ သင့်အတွက် အလုပ်ဆိုတာ ရှားပါးပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ CV Form ရေးတဲ့အခါ ကိစ္စသေးသေးလေးတွေကအစ သေချာ ဂရုစိုက်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။
ပိုမိုအောင်မြင်တဲ့ ဘဝလမ်းကြောင်းကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။
မြန်မာစာ နဲ့ မြန်မာစကားကိုဖျက်ဆီးသလိုဖြစ်နေတဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်က ဗရုတ်သုတ်ခစကားလုံးများ
ပလတ်စတစ်တွေကို စားသုံးပြီး ရေအဖြစ်ဓာတ်ပြောင်းစေမယ့် ဘက်တီးရီးယားတစ်မျိုးကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့